Uhlela ukuvuka ngeChiefs umqeqeshi weStellies - Impempe
Uhlela ukuvuka ngeChiefs umqeqeshi weStellies
USteve Barker usekudlulise ngokuthi yinto vele eyenzekayo ebholeni ukushaywa kweStellenbosch FC isekhaya ngo 3-0 yiBaroka FC ngoLwesithathu. IStellies sisale sizibuza ukuthi kwenzekeni ngemuva kokuthi iBakgakga ibabhaxabule kanzima kungazelele muntu. “Siphoxekile, wonke umuntu olapha upatheke kabi,” kusho uBarker ngalo mphumela odumazayo.
“Besicabanga ukuthi ngoba sisekhaya sizothola umphumela ojabulisayo kwiBaroka, kodwa akwenzekanga. Kodwa ke yinto eyenzekayo ukuthi izinto zivele zingakuhambeli kahle. Sidinga ukubuya ngamandla ngoMgqibelo kanti awukho umdlalo wokwenza lokho odlula oweKaizer Chiefs esefomini enhle kulezi zinsuku. Yithuba lokuthi sikhombise inhloso yethu kule ligi,” kuqhuba uBarker.
IStellenbosch izobhekana neZimpofana ekhaya eDanie Craven Stadium emdlalweni weDStv Premiership ngoMgqibelo ngo 5 ntambama.
“Sidinga ukukhohlwa okwenzeke kwiBaroka bese sibheka phambili ngethemba, sizilungiselele kahle. IChiefs iza igcwele ukuzethemba kulandela ukunqoba kwayo imidlalo emithathu kulandela.
“Kodwa kunzima kule ligi ukuwina imidlalo emine kulandelana, kanti nathi siyiqembu elingakaze lidlale imidlalo emine ngaphandle kokuwina. Kumele sizethembe sazi ukuthi sinethuba kokuwuwina lo mdlalo, singakwazi ukushaya iChiefs. Banawo amandla abo, futhi banabadlali abakwazi ukubawinela imidlalo njengoba sibonile kule midlalo yabo emithathu edlule.
“Kubalulekile ukuthi sikwazi lokho ukuze sikwazi ukukuqapha. Kodwa nathi kumele sibakhombise ubukhali bethu, kumele singabavumeli bazenzele. Akufanele sicabange ukuthi sizohlala emuva sibagade, kumele nathi sigadle,” kuchaza lo mqeqeshi oneminyaka engu-53.
Emidlalweni emihlanu edlule, iStellenbosch sisawine kanye, sadlala ngokulingana kathathu sabe sesihlulwa kanye.
“Ngicabanga ukuthi yonke imidlalo ibalulekile futhi kumele siyiwine. Uma kuhamba isikhathi ungawini, ube sewukuhalela kakhulu. Lona ngumdlalo la okumele nakanjani siwole amaphuzu amathathu. Kubalulekile ukuthi siwine lo mdlalo,” kuphetha uBarker.
Previous Previous post: ISharks ihlome ngamaBhokobhoko koweCarling Currie Cup
Next Next post: Useqokwe ngokugcwele uMotlanthe kwesokuphatha iSafa